Al-shabaab oo deegaanka Lamu ee dalka Kenya weeraro ka geystay – Madal Furan
Hoy > Warka > Al-shabaab oo deegaanka Lamu ee dalka Kenya weeraro ka geystay
Al-shabaab oo deegaanka Lamu ee dalka Kenya weeraro ka geystay
Lamu (Madal Furan) – Deegaanka Lamu ee dalka Kenya ayaa ururka Al Shabaab waxaa ay ka fuliyeen weerar qorsheysan oo ay ku burburiyeen xarun ay leedahay shirkad Koronto oo hoostagta dowladda Kenya.
Sida ay sheegayaan wararka degaankaas ka imaanaya hawlgalkan ay ururka Al-shabaab ka fuliyeen deegaanka Lamu ayaa waxay ku burburiyeen taawarkii shirkaddaas oo ka taagnaa xarunta ay ku leeyihiin degaanka Malihooy oo u dhexeeya Hindi iyo Witu ee gobolka Lamu.
Dadka degaanka oo la hadlay warbaahinta gudaha dalka Kenya ayaa u sheegeen taawarka la burburiyey inuu ahaa mid aad u weyn oo adeegga korontada siin jiray gobolka Lamu iyo gobolada kale ee ku xeeran.
Al Shabaab ayaa war ay ku soo qoreen baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxa ay ku sheegteen inay si nabadgelyo ah ku baxsadeen raggii weerarka fuliyay iyag oo aanan wax iska caabin ah kala kulmin ciidamada Kenya.
Warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in korontadu ka go’day qeybo ka mid ah gobolada Lamu iyo Tana-riiva, iyadoo ilaa hadda aanay dowladda hoose u suuragalin in dib loo soo celiyo adeeggii korontada.
Al Shabaab ayaa dhawr jeer oo hore sidan oo kale weeraro lagu beegsanayo xarumaha korontada ee gobolka Lamu ka fuliyey halkaasi.
Waayihii murugada iyo farxadda ee siyaasadda Shariif Xasan
Shirweyne lagu nabaddeeynayo Soomaalida iyo Oromada oo dhowaan furmaya.
Sawiro:- Garsoorayaashii uu Magacaabay Madaxweyne Farmaajo oo la dhaariyey